Sekoly katolika Jean XXIII Anatihazo Isotry : matin’ny pesta sa matin’ny aretin-tenda ilay mpianatra ? | NewsMada
Sekoly katolika Jean XXIII Anatihazo Isotry : matin’ny pesta sa matin’ny aretin-tenda ilay mpianatra ?
Par Taratra sur 04/11/2017
Mifamahofaho ka mahatonga resabe, ny vaovao navoakan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, mikasika ilay mpianatry ny sekoly katolika Jean XXIII, Anatihazo Isotry, hoe “namoy ny ainy noho ny aretina pesta”. Vaovao izay notsipahin’ny tompon’andraikitry ny sekoly ary nohamafisiny fa “aretin-tenda” no nahafaty io mpianatra io.
Tao amin’ny pejy facebook-n’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena no nivoahan’ity vaovao ity, omaly. Vao nivoaka kelikely ilay vaovao, resabe ny tohiny hita eo ambany. Samy manana ny filazany ny mpanao “commentaires”. Andaniny, ireo mpomba ny sekoly katolika, mitsikera ny minisiteran’ny Fanabeazana. Ankilany, ireo mpiandany amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, toa mandatsa ny mpitantana ny sekoly katolika amin’ny ankapobeny.
Araka ny voalaza ao anatin’ilay fanambaran’ny minisitera, mpianatra kilasy 8 ème, ao amin’ny sekoly Jean XXII, eny Anatihazo Isotry, ity voalaza hoe namoy ny ainy ity. Voamarina, hoy ilay fanambarana, fa namoy ny ainy noho ny pesta aretin-tratra, ny asabotsy teo ilay mpianatra. Nomarihiny fa nianatra io zaza io ny alarobia 25 oktobra lasa teo, ary naiditra hopitaly ny alin’iny. Efa nisy, araka ny voalaza ihany, ny fandraisana fepetra nataon’ny tompon’andraikitra sy ny dokotera tamin’ny alalan’ny fanaraha-maso ireo mpiray kilasy tamin’ity mpianatra voalaza fa namoy ny ainy ity. Misy mihitsy aza ery amin’ny faran’ilay fanambarana ny fankaherezana ny fianakavian’ilay mpianatra.
Hatramin’ny nanombohan’ny fihanak’ity valanaretina pesta ity, nilaza talen’ny serasera eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Tsitoara Serge, fa “mangarahara hatrany ny fanomezam-baovao ao amin’ny tranonkalam-pifandraisan’ny minisitera, indrindra raha mahakasika ny tontolon’ny fanabeazana ny trangan’aretina”.
Etsy ankilan’izany anefa, mitsipaka marindrano io vaovao io ny tompon’andraikitry ny sekoly katolika Jean XXIII. “Tsy noho ny aretina pesta velively no nahafaty io mpianatra io, fa noho ny aretin-tenda (angine)”. Ny mpitsabo mihitsy, hoy ihany ny fanamarihana, no nanambara fa izay ny nitarika ny tsy fahasalamany, niafara tamin’izao fahafatesany izao. Nohamafisin’ny mpitantana ny sekoly fa “natao fitiliana indroa miantoana, teny HJRA sy teny amin’ny Hopitaly Befelatanana, ilay mpianatra”. Ny vokatr’ireo fitiliana ireo, araka ny voalaza, tsy pesta velively ny nahafaty io mpianatra io. Nilaza koa ny renin’ilay zaza fa nentina teny amin’ny hopitalin’ny ankizy, eny Tsaralalàna, indray ilay mpianatra. Mbola naverina fanintelony indray ny fitiliana, ary novidiana 4.800 Ar mihitsy aza ny fitaovana nanaovana izany. Antsasak’adiny taorian’izay, namoy ny ainy ilay ankizy, ary nambaran’ny mpitsabo fa noho ny aretina pesta no nitarika ny fahafatesany. Araka ny fanazavany ihany “norovitin’ny mpitsabo ny “carnet” nampiasaina tany amin’ny hopitaly”. Inona ny dikan’izany ?
Eo anatrehan’ireo vaovao roa mifanohitra ireo, mipetraka ny fanontaniana. Inona ny tena marina amin’ity tranga ity ? Iza ny mamoaka vaovao tsy marina ka mahatonga izao resabe sy savorovoron-tsaina izao ? Ilàna fangaraharana avokoa izany rehetra izany, indrindra fa efa nisy ny tsy fitoviam-pijery, nahatonga resabe saika tsy vita, teo amin’ny tompon’andraikitry ny sekoly katolika sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena teo aloha teo.
2 r&eacuteponses à "Sekoly katolika Jean XXIII Anatihazo Isotry : matin’ny pesta sa matin’ny aretin-tenda ilay mpianatra ?"
Safidy 04/11/2017 à 20:05
Tsy fantatra mihits ny marina , fa areti-tenda ve de hamono?? Mapieritreritra ihany .
Nefa fampaherezana ho an’ny fianakavian’ny maty
Hope 08/11/2017 à 16:52
Tsy fantatra intsony ny tena marina. Fa raha izaho manokana aloha dia kely finoana ity fanjakana mpandainga ity. Misy tokoa ny aretin-denta mahafaty, indrisy, ohatra @ izany ny épiglottite. Marary ny tenda, marary be, ary mitarika fahasemporana izy io.